Vaovao - Indostrian'ny fitaovam-pitsaboana Outlook Y2021- Y2025
Syringes amin'ny vaksiny
Vokatra fitsaboana mafy
Transducer Channel tokana
Tripd Channel Transducer
Rà mandoto santionany
Fampiasana sary an-tsary
Ho an'i Bayer / Medrad
CT-Sigara / Acist / EZEM
MR-Sigara / Acist / EZEM
Tube avo fanerena
Fampiasana maro an'isa
Syringe fampiasana maro
Tube fampiasa maro
CT Injector tokana
Vokatry ny kardia sy ny peripheral
Tsipika fanerena avo
Brochure momba ny vokatra
Indostrian'ny fitaovana fampitaovana fitsaboana Y2021- Y2025
Ny indostrian'ny fitaovam-pitsaboana sinoa dia sehatry ny haingam-pandeha ary nanjary laharana faharoa amin'ny tsena fitsaboana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Ny anton'ny fitomboana haingana dia satria ny fiakaran'ny vidin'ny fahasalamana amin'ny fitaovam-pitsaboana, fanafody, hopitaly ary fiantohana ara-pahasalamana. Ankoatr'izay, maro ireo mpilalao domesitika mitsambikina eny an-tsena ary ireo mpilalao manjakazaka dia manova haingana ny teknolojia misy ary manavao ireo vokatra vaovao.
Noho ny Covid-19, i China dia ao anatin'ny vanim-potoana fampiroboroboana haingana ireo vokatra fitaovana fitsaboana izay mikendry ny hahatratra ny marika foregin. Mandritra izany fotoana izany, ny vokatra vaovao sy ny teknolojia fitsaboana vaovao dia ampidirina tsy tapaka amin'ny tsena izay mitarika ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny fitaovana fitsaboana, indrindra ny fitomboan'ny orinasa mitarika isaky ny sehatra.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, niditra tao anatin'ny vanim-potoana fampivoarana ny fanavaozana ny vokatra sy ny teknolojia i Shina, toy ny stent biodegradable natombok'i Lepu Medical, ny fantsona IVD natombok'i Antu Biotech sy Mindray Medical, ary ny endoscopy novokarin'i Nanwei Medical. Ny vokatra ultrasound miloko avo lenta novokarin'i Mindray Medical sy Kaili Medical, ary ny fitaovana fitarafana marobe an'ny United Imaging Medical dia manana ny fahaizana manamboatra ireo vokatra afovoany sy avo lenta nafarana any an-tsahan'izy ireo, ka mamorona hery manelanelana ao ny fanavaozana sy ny fanavaozana ny fitaovana fitsaboana any Sina. .
Amin'ny taona 2019, manana elanelam-bola be ny orinasa voatanisa fitaovana fitsaboana mpitsabo sinoa. Ireo orinasa 20 voatanisa ambony manana fidiram-bola avo indrindra dia ny Mindray Medical, mahatratra 16,556 miliara ny vola miditra, ary ny orinasa Zhende Medical no ambany indrindra, miaraka amin'ny 1,6565 miliara yuan. Ny tahan'ny fitomboan'ny vola miditra amin'ny karaman'ny orinasa Top20 isan-taona isan-taona dia amin'ny avo lenta. Ireo orinasa ambony 20 voatanisa amin'ny karama dia nozaraina indrindra tany Shandong, Guangdong ary Zhejiang.
Ny isan'ny olona mihantitra ao Shina dia mitombo haingana kokoa noho ny ankamaroan'ny firenena rehetra eto an-tany. Miaraka amin'ny isan'ny olona mihantitra haingana, ny tahan'ny fidiran'ny fihinana azo ampiasaina dia nampiroborobo ny fampandrosoana haingana ny tsenan'ny fitaovana fitsaboana.
Mitombo hatrany ny tahan'ny aretina homamiadana sy aretim-po ary mitombo hatrany ny fampiharana ny fitiliana fanamafisana fanatsarana ao amin'ny toeram-pitsaboana, izay mampitombo ny fampiasana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny radiolojia avo lenta. Ny tahan'ny grwoth scanning dia tombanana ho tonga amin'ny 194 tapitrisa amin'ny 2022 raha oharina amin'ny 63 tapitrisa tamin'ny 2015.
Ny famaritana marina dia mitaky fahazavana avo lenta sy fahamendrehan'ny haitao amin'ny sary.
Politika iray hafa momba ny indust ryth fitaovana dia ny fanekena ny andininy faha-35 amin'ny "Fitsipika momba ny fanaraha-maso sy ny fitantanana ireo fitaovana fitsaboana". Voalaza ao fa tsy tokony hampiasaina matetika ny fitaovana fitsaboana tokana. Ny fanary ara-pitsaboana efa niasa dia tokony horavana sy hosoratana mifanaraka amin'ny lalàna mifehy. Ny fandraràna ny fanjifana azo ampiasaina dia manakana ny hopitaly sasany tsy hampiasa indray ny fitaovana ampiasaina amin'ny haino aman-jery avo lenta mba hamonjy vola. Izy io koa no mitarika ny fangatahana fitaovana azo ampiasaina amin'ny sary avo lenta.
Miorina amin'ny fironana etsy ambony, ny indostrian'ny fitaovana fitsaboana dia miova tanteraka. Ny tahan'ny fitomboan'ny fitambarana isan-taona dia manodidina ny 28%. Antmed no mitarikasyringe avo lenta fanamboarana any Shina ary mampiasa vola be amin'ny fizotran'ny R&D izahay. Manantena ny handray anjara amin'ny indostrian'ny fitsaboana sinoa izahay ary hitazona ny toeran'ny mpitarika ny indostria.
Fotoana fandefasana: Feb-26-2021
18 Jinhui Ave., Pingshan New District, Shenzhen, 518122, Sina
Syringe amin'ny vaksiny 1ML / 3ML
Ho an'ny fanontaniana rehetra dia hamaly izahay ao anatin'ny 24 ora.